Ilebheli yesitikha, ibhokisi yesipho, ibhokisi yokugcina iphepha-Huaguang
Ukubonelela abathengi ngenkonzo elungileyo kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu. Imizamo, eyakhayo, ephezulu, yokuzinqwenela, ukusebenzisana ngokuphumelela.
Custom logo umbala yoshicilelo ikofu 350g c emhlophe ...
Ukupakisha ibhokisi yekhadi kusetyenziswa ngokubanzi. Umzekelo, kwishishini lokutya, kukho iibhokisi zekhadi zekofu, iibhokisi zekhadi leelekese, iibhokisi zamakhadi ezicookie njalo njalo. Umzi mveliso wobuhle ungaphezulu, njengebhokisi yamakhadi emilebe, ibhokisi yemaski, ibhokisi yekhadi le toner njalo njalo; Kukwakho nomzi mveliso wezihlangu nempahla, onjengeekawusi, iimpahla, iimpahla zangaphantsi njalo njalo. Xa kuthelekiswa nebhokisi yesipho, ibhokisi yekhadi ayibizi, kwaye ibhokisi yekhadi inokugoqwa, egcina kakhulu iindleko zokuhamba. Kwaye ibhokisi yekhadi ilungile njengesipho ...
Ibhokisi yephepha ekhathalelayo yolusu ifakwe ngePV yencwadi ...
Ngophuhliso kunye nokuhlaziywa kwetekhnoloji kunye nezixhobo, inkqubo yemveliso yokupakisha ibhokisi yesipho iye yalawulwa ngamashishini amaninzi nangakumbi. Ukusetyenziswa kwetekhnoloji entsha kuphucule kakhulu ukusebenza kwemveliso, kwaye izixhobo ezintsha ngokuthe ngcembe zithathe indawo yomsebenzi odinisayo. Ukuphuculwa kwesoftware kunye nehardware kuyiphucule imveliso Uhlobo lwebhokisi yesipho yazo zonke iintlobo, ukusuka kumanqaku esakhiwo ukuya phezulu nasezantsi ngokudityaniswa kwesiciko kunye nefom yesiseko, em ...
Ibhokisi yefayile yamaphephancwadi enefayile yenye yeefayile zebhokisi. Yibhokisi evulekileyo esetyenziswa rhoqo ngabasebenzi baseofisini kugcino kunye nokuhlelwa. Kulula ukugcina nokuthatha iifayile. Rhoqo kukho amaxwebhu amaninzi eofisini. Ezinye zazo zibalulekile kwaye zisetyenziswa rhoqo. Kukho izingqinisiso, ekubhekiswa kuzo ngamanye amaxesha; Ezinye azifane zifuneke kwaye zihlala zihlala zingenzi nto. Ukuba onke la maxwebhu adityanisiwe, alungelelaniswa kwaye akukho lula kuthi ukuwajonga. Kulapho i-rack co co ...
Ibhokisi ephethe into, eyile nto iya kuba yinto (uninzi lukhomba kwinqaku elincinci, lunjenge: zokubhala kweofisi, izithambiso, idatha yefayile, isixhobo esincinci, iikawusi, ibhulukhwe yangaphantsi njlnjl.) Qokelela ndawonye, ​​njengoko igama lithetha ukugcina ibhokisi. Iibhokisi zokugcina, ezikwabizwa ngokuba ziibhokisi zakudala, zazisetyenziswa ngamaqela ezinto zakudala kwiintsuku zokuqala ukugcina izinto ezivunyiweyo kunye nezicwangcisiweyo zezinto zenkcubeko. Ezi bhokisi zihlala zinenombolo engqongqo, ezinye zinkulu kwaye zincinci, kodwa uninzi zinobungakanani bebhokisi yezihlangu (ungafundanga ...
Elungiselelweyo Ilogo Ishicilelwe Ihowuliseyili zekhadibhodi Gi ...
Ukuprinta, ziintlobo ngeentlobo zeemveliso eziprintiweyo, phantse zigcwele iimpahla zabantu, ukutya, izindlu, ukuhamba endle, kwaye ubomi babantu busondele kakhulu. Nguwuphi umlinganiso webhetshi yamalungu aphilayo? Ayisiyiyo kuphela ukubona ukuba umbala wokuprinta uhambelana neemfuno, kodwa ikwakhona ukubona ukuba le bhetshi ye-inki ephilayo izinzile na. Namhlanje, ngokusekwe kule bhokisi yesipho, ndingathanda ukwabelana nawe ngezinto ezininzi ezinefuthe kuzinzo kumbala we-inki: Iziphumo ezibonakalayo ze-inki ...
Iibhokisi zePhepha leLebhu elihonjiswe ngesandla elenzelwe ngesandla ...
Ukwenziwa kunye nokuveliswa kweebhokisi zezacholo kusekwe ekuyilweni kobucwebe. Ingaphakathi ngokubanzi lenzelwe ngezithuba ezininzi ukunqanda ukukrwela okungafunekiyo okubangelwa kukudibana nobucwebe. Ezinye iibhokisi zobucwebe ziyahluka kubume bangaphakathi ngokweemilo ezizodwa kunye nezinto. Ukusetyenziswa okuphambili kwebhokisi yobucwebe, ukugcina ubucwebe obuhlala buhleli njengempembelelo entsha, kuthintela uthuli kunye namasuntswana emoyeni kumjelo wobuso bezinto zokunxiba kunye nokunxiba, kwaye unike nabaqokeleli bezacholo ...
Ibhokisi Toy abantwana amakhadibhodi iphepha ityesi w ...
Le sutikheyisi yephepha isetyenziselwa ukusongela izipho zabantwana okanye ukucwangcisa iithoyi ezincinci zabantwana. Ithoni yayo ephambili iblue kwaye imhlophe, uyilo lwepateni yamachaphaza amaza, ijongeka icocekile, ikhululekile kwaye intle, ilungele abantwana. Kwaye ukuhambelana kombala, andinakukunceda kodwa ndifuna ukusebenzisa eli phepha lisingathe ityesi, kwezi zinto sele zichaziwe ezichaphazela ukutshintsha kombala kwezinto eziprintiweyo. Phrinta kwinkqubo yokuprinta kunye nokugcina, umbala wayo, ukukhanya, ukugcwala kuhlala kuguquka, ...
Elungiselelweyo imilo ngeenxa isipho isipho kunye qual ...
Uyilo lokupakisha kukuphononongwa okusebenzayo kwehlabathi ngengqondo ebonakalayo njengeziko kunye nezinye izivamvo ezine njengomncedisi. Ebomini, nganye yorhwebo ivuselela ngamandla izivamvo zabantu ngeendlela ezahlukeneyo, ibangela umnqweno wokuthenga. Kunokuthiwa umtsalane wokupakisha luluntu lwanamhlanje olusebenzisa "izivamvo ezintlanu" kunendlela yentengiso enomtsalane. Namhlanje, makhe sithethe ngoyilo lokupakisha ngale bhokisi yeesipho ejikelezileyo: Umbono liziko lobugcisa kunye ...
isiciko sokugcina ibhokisi esirinjiweyo kwiikawusi ...
Ukuthabatha: oko kukuthi khetha izinto ezifanelekileyo zokupakisha, uyilo lokupakisha kusetyenziswa itekhnoloji yobukrelekrele, yokupakisha iimpahla zemodeli yolwakhiwo lwesikhongozeli kunye nokuhombisa koyilo lomhombiso wokupakisha, ukuya kumbala wokupakisha, imilo, izinto kunye nokunye kuzo zonke iintlobo zoyilo ulwimi, unika yorhwebo ubuntu eyodwa, kodwa kwakhona ukusekwa umfanekiso ogqibeleleyo ezibonwayo ukuba into, njengoko kuyimfuneko ukuze abathengi umgwebo umgangatho wengqolowa evela umququ, sha ...
Zininzi iindlela zeentyatyambo, siya kuzinika abantu abohlukeneyo ngokweentlobo ezahlukeneyo, baveze intsingiselo eyahlukileyo. Nokuba ukuqonda kweentyatyambo akukho nzulu kakhulu, abantu bale mihla ngokusisiseko bayazi ukuthumela iiroses kubathandi, ikhathuni kubadala, kunye neenyibiba kubahlobo. Kukho isipha, ibhaskiti yesandla, ishelufu yebhasikiti, ukupakishwa kwebhokisi yeentyatyambo, nganye inendima eyahlukileyo kunye nefuthe. Umzekelo, kwimeko yam, ndingathanda ukufumana isipha seentyatyambo ngoSuku lweValentine, olu v ...
Siqhele ukubeka iimpahla zethu zangaphantsi okanye iikawusi kwidrowa, kodwa kulula ukuziphazamisa. Iibhokisi zokugcina kulula ukuzihlela, kulula ukuzilungiselela, kunye nococeko ngakumbi ukugcina iimpahla zangaphantsi kunye neekawusi zahlukile. Nangona kunjalo ibhokisi yokugcina iphepha kwintengiso igcwele izinto ezintle emehlweni, khetha ibhokisi efanelekileyo ibaluleke kakhulu, kungenjalo ayinakuba luncedo, okanye ingazinzisi ngakumbi ngakumbi ukuba unosapho olukhulu, kuya kubakho iimpahla ezifuna iibhokisi zokugcina iphepha. Yiba ...
Amanqaku-amathathu ashushu Ukunyathela Amanqaku oLawulo loMgangatho kunye neZiphene Unyango
Ukunyathela okushushu-ntathu kuyindibaniselwano yesiphumo sokucinezela i-bump kunye ne-stamping eshushu, ene-anti-fake kunye nefuthe lobugcisa, ngenxa yoko isetyenziswe ngokubanzi. Kodwa ulawulo lomgangatho wesitampu eshushu esimbaxa sesithathu yingxaki enobunzima. Eli phepha ngokufutshane ...
Yintoni oyaziyo malunga nokupakishwa kwebhokisi yesipho esiphakamileyo?
Malunga nenkcazo yebhokisi yesipho esiphakamileyo, nokuba uphando lukaGoogle, alunazo neenkcazo ezichanekileyo, kwaye inkcazo yomntu ngamnye yahlukile, eli nqaku lixoxe ngebhokisi yesipho esiphakamileyo, ngakumbi ibhokisi yokuncamathisela, efuna inkqubo eninzi , kwaye kufuneka ibhokisi yokuncamathisela ebanzi, umxholo f ...
Ukupakisha Ulwazi loLwazi: Qonda iiMpawu zePhepha, Phucula uMgangatho wokuPakisha nokuPrinta
Abstract: Iphepha zezona zinto zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ekuprinteni. Iimpawu zayo ezibonakalayo zinempembelelo ethe ngqo okanye engathanga ngqo kumgangatho wokuprinta. Ukuchaneka kokuqonda kunye nokuqonda ubume bephepha, ngokweempawu zemveliso, ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kwephepha ukuphucula ...